12 Nof 2018. Real Madrid ayaa si Rasmi ah xilka ugu dhiibatay Santiago Solari iyagoona ka saaray ku meel gaarnimada. Halyeyga Los Blancos ayaa si ku meel gaar ah u sii hayay xilka kooxda kaddib markii la ceyriyay More...
100-kii u Sharaxnaa Golden Boy oo laga soo reebay 20-xiddig oo qura…(Waa kuwee??)
02 Nof 2018. Boqolkii xiddig ee u sharaxnaa abaal marinta Wiilka Dahabiga ‘Golden Boy’ ayaa laga soo reebay 20 laacib oo qura. Mbappe oo sanadkii la soo dhaafay uun ku guuleystay ayaa misane sanadkaan ugu More...
02 Nof 2018. Warsidaha Tuttosport ayaa 100-kii xiddig ee u sharaxnaa abaal marinta Wiilka Dahabiga ka soo reebay 20-xiddig oo qura. Haddaba sidee abaal marintan horey loogu soo kala guuleystay. Halka ka EEG: More...
Arsenal iyo Tottenham oo qoorta la isku galiyay Dhammaadka Carabao Cup.
01 Nof 2018. Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Tottenham ayaa qoorta la isku suray kaddib markii la soo saaray isku aadka wareega sideed dhammaadka ee Carabao Cup. Gunners ayaa ka soo adkaatay Blackpool halka More...
Ogoow hal arin oo ay isku haayaan Real Madrid iyo Antonio Conte (Wax badan ka ogoow waxa ka socda Bernabeu).
29 Okt 2018 Waxaa hakad uu ku yimid wadahadaladii u dhexeeyay Real Madrid iyo tababare Antonio Conte kadib is fahan waa dhex maray labada dhinac. ABC ayaa daaha ka qaaday in wadahadalada Real Madrid iyo Antonio More...
Barcelona ayaa Gurigeeda Camp Nou xalay ku bahdishay Real Madrid oo ay ku martay 5-1.
29 Okt 2018. Barcelona ayaa Gurigeeda Camp Nou xalay ku bahdishay Real Madrid oo ay ku martay 5-1. Taageerayaasha Barca ayaa Caay ula soo istaagay Cayaaryahanka ay necebyihiin ee Serigio Ramos balse Gerard Pique More...
Oct 29, 2018 Leicester City, England: Milkiilaha kooxda Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha ayaa la xaqiijiyay inuu ka mid ahaa shan qof oo ku geeriyootay diyaaradii ku burburtay banaanka garoonka King Power More...
Julen Lopetegui oo Habeen Dambe laga ceyrin doono Real Madrid haddii.
22 Okt 2018. Julen Lopetegui ayaa laga ceyrin doonaa kooxda Real Madrid ka hor kulanka El Clasico ee usbuuca soo socda haddii ay guul darro ka soo gaarto Viktoria Plzen. Los Blancos ayaa habeen dambe la ciyaari More...
Luka Modric ayaa qadyaan ka soo istaagay kooxda Real Madrid.
22 Okt 2018. Luka Modric ayaa qadyaan ka soo istaagay kooxda Real Madrid isagoona diyaar u ah inuu ka tago bisha Janaayo marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Kabtanka xulka Croatia ayaa si wayn More...